Rosìa : Andron’ny Mpianakavy, ny Fifankatiavana ary ny Fanajana ny Fanambadiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Jolay 2008 13:20 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Français, Español, 繁體中文, 简体中文, English
Ny Andron'ny Fitiavam-bady sy ny fahasambaran'ny mpianakavy – nankalazaina tamin'ny faha-8 Jolay, Môskoa, Rosìa (sary nalain'i Veronica Khokhlova, mpanoratra ny lahatsoratra nadika)
Nahazo andro tsy fiasana vaovao iray indray i Rosìa : ny Andron'ny Mpianakavy, ny fifankatiavana ary ny fanajana ny fanambadiana, izay ankalazaina isaky ny 8 Jolay. Amin'ny alalan'ny lahatsoratra nampitondraina ny lohateny hoe “Avy any Rosìa miaraka amin'ny Fifankatiavana (ny samy mpianakavy)” na “From Russia With (Family) Love” [FANAMPIM-PANAZAVANA : lohateny malazan'ny sarimihetsika James Bond 007 izay nivoaka tamin'ny taona 1963 ny “From Russia With Love” na “Bons Baisers de Russie” araky ny dikanteny Frantsay] Yonatan Pomrenze izay mpandrindra vaovao anivon'ny haino aman-jery NBC no nanolotra fanazavana izay mombamomba ity andro tsy fiasana vaovao amin'ny firenena ity :
[…] Izay tsindriana mafy […] tsy dia izay hiterahan'ny fitiavana vaovao amin'ny olona, fa kosa ny mba haharetan'ny fifankatiavan'ireo olona efa tia. […]
Ny Lahatsoratry ny fialan-tsasatra (RUS) izay diam-penin'i eprst2000 izay mpampiasa LJ [LiveJournal] dia nampilatsa-dranomaso mpamaky sasantsasany ka nahatonga azy ho nisondrotra ho ao anatin'ny filaharan'ireo blaogy 30 sangany ao amin'ny filaharana atolotry ny vohikala Yandex Blogs izany:
Turns out today is some kind of a special holiday, with a long name that ends with ‘fidelity.’ The Day of Family, Love and Fidelity. Or something like that […]
All TV talk shows today solemnly featured families with many children. Some with nine, others with 11 kids […]
Toa hoe karazana andro tsy fiasana androany, izay nampitondraina anarana lavareny izay mifarana amin'ny teny hoe “Fanajana ny Fanambadiana.” Ny Andron'ny Mpianakavy, ny Fifankatiavana ary ny Fanajana ny Fanambadiana. Na zavajavatra toy izany […]
Ireo fandaharana rehetra izay nalefan'ny fahitalavitra androany dia samy nampiseho fianakaviana izay manan-janaka maro. Ny sasany 9, ny hafa zaza 11[…]
Androany, nambaran'ny reniko izay miasa anivon'ny toeram-piterahana fa : “tao amin'ny Hôpitalinay, nandà tsy (hitaiza) ireto zaza kambana vao naterany ity reny iray. Marina e. 36 taona izy. Ary efa manana zanaka vavy iray 8 taona.” Hain'ny reniko ny manolotra fanàfana ireo zazamenavava izay tsy mahay manondro izay maharary azy satria zara raha andro vitsy fotsiny ihany no niainany. Ary fantatry ny reniko tsara. Sady amin'ny maha filohan'ny sampan-draharaha azy, dia anjarany ny mitafatafa amin'ireo vehivavy izay manam-pikasana ny hamoy ny zanany (vao naterany). Manana ny teny manokana sy izay fomba itondrany izany resadresaka izany izy, izay sarotra adika ho soratra. “Dia nanontaniako izy, – hoy ny reniko nanohy ny tantarany, – Amin'ny fomba ahoana no ahafahanao mandao ireto zaza kambana ireto ?” – “Hitanao, -hoy ilay reny namaly, – tsy ho afaka ny hanome izay ilain-dry zareo aho.” “Ka aleo hisy hanangana azy ireto sy hitarika azy amin'ny toerana mety, sy hitia azy toy ny zanany naterany.” Mbola nanohy indray ny reniko : “Mba fantatrao moa fa tsy fomba loatra ny manangana zaza roa indray miaraka be izao ? Raha ny 99-n'ny taham-pananganana dia zaza tokana ihany no atsangan'ny mpivady iray. Ary araky ny lalàna manan-kery anefa, dia tsy azo sarahina mihitsy (eo am-pananganana azy) izay zaza kambana. Indrindra indrindra raha kambana vavy sy lahy ry zareo. Satria sao dia mihaona sy miaraka izy ireo any aoriana any ka manjary mamoafady […]” Nandinika nandritra ny andro vitsivitsy ilay Ramatoa. Ary mandrak'androany dia tsy mbola niova hevitra ny hitazona ireo zaza-kambana izy. Nambarany fa noheveriny fa hampakatra azy ho vadiny ilay rain-jaza kinanjo tsy notanterahiny izany. “Tsy zanako ireo !” hoy ilay rangahy “Satria tsy mbola nisy izany kambana izany mihitsy hatrizay hatrizay taty amin'ny fianakavianay !”
Tsy nahaloa-peo aho teo am-pihainoana izay nolaizain-dreniko. Dia hoy izy nanohy : “Vao tsy ela akory izay no nisy tovovavy 18 taona tera-bao izay nandao ny zazany lahikely. Niezaky ny niresaka taminy amin'izay fomba samihafa noheveriko fa azo atao aho, saingy nijery ahy tsara izy ary hoy izy namaly ahy hoe : “Mba fantatrao moa fa ny raiko no lehiben'itsy sy izato faritra irony ? Sady izay koa ny reniko dia miara-miasa amin'ny fikambanana izato sy ery ? Olona andrandraina eo anivon'ny fiaraha-monina ry zareo. Azonao ve, fa tsy afaka manao izany aho [mitazona ity zanako lahy ity].” – “Moa ve fantatry ny ray aman-dreninao fa harianao ity zanakao ity ?” – “Fantatr'i Neny.” – “Ary ny rainao ?” – “…” – “Hay izany samy matahotry ny hamboraka izany amin'ny rainao ianao sy Neninareo. Akory no mahatonga ny zanakavavin'ny lehilahy toy izany mahavita zaza anelakelan-trano [ivelan'ny fanambadiana] ?” – “…” – “Ambarao ahy hoe izay antony tsy nanalanao io zaza tam-bohokao io ?” – “Fa izaho ve heverinao ho vendrana e ? Mety miteraka olana ara-pahasalamana izany. Dia ahoana raha toa ka tsy afaka mitoe-jaza intsony aho any aoriana any ?”
“Mbola ny reniko ihany no mitantara. Nisy tovovavy vao tera-bao tao amin'ny sampan-draharaha iasany. 25 taona ilay tovovavy ary somary tsy ampy volana izany izy [sembana ara-tsaina]. Tonga ireo ray aman-dreniny, tonga koa ireo mpiambina azy. Mitomany ny reniny, ny rainy kosa manenjana ny vazany mba tsy hihiaka. Olona samy ampy volana izy roroa, salama tsara fa kisendrasendra fotsiny no naha-toy izao ny zanany vavy. Nianatra tany amin'ny sekoly natokana hoan'ny zaza ilana fanaraha-maso manokana rakalavavy ary dia tafahaona tamina tovolahy tany. Samy 25 taona avokoa izy roa, saingy zara raha 10 taona ara-tsaina. Tsy niafina tamin'iza n'iza fa niaraka ry zareo. Nambaran'ny dokotera fa arak'ireo toe-batany ireo dia samy momba [tsy afaka miteraka] avokoa ireo zatovo roa ka tsy misy izay tokony hahiana. Azavao aminy fotsiny izay fampiasana ny fiarò [condom, préservatif].”
Nisy zazalahy teraka. Tsy azo ambara ho vaventy, fa salama. 90 ny taham-bitany mba hitoviany toetoetra amin'ny ray aman-dreniny. Tonga ireto dadabe sy nenibe vaovao. Mitomany. Mameno izato taratasy fanambarana fa hilaozany ny zaza. Hisotro ronono tsy ho ela mantsy ry zareo rehefa avy nitaritarika azy nandritrany fiainany manontolo, olona tsotsotra, tsy manana dolara zato amin'arivo an-tànana. Zara raha mahatratra 100 $ ny fanampiana fidirambolan'ity tovovavy amin'ny maha sembana azy. Avy aizy ary no tokony ihavian'izay vola ho azy ireo ? Rehefa hodimandry izahay, izay no hiantoka azy telo mianaka ireto ? Tsy afaka na dia hitrotro ny zanany akory aza ity renin-jaza ity, tsy afaka ny hanolo ny lamban-janany. Dia mbola izahay indray izao no ianjeran'ity adidy vaovao ity. Anefa dia efa torak'izany nandritra ny fiainanay manontolo !!!… Ka dia amin'ny fomba ahoana no ahafahanay mitaiza azy ???
Tsy narian-dry zareo indray ilay zaza nony farany.
My mother said that initially they did sign the papers to give him up. And then the young mama showed up at the entrance to the newborns department – stood there, howling. She can't speak well, so she stood and howled. She got her breast milk coming in. Started nursing the baby. Wouldn't let him go. In violation of the rules, as an exception, they allowed the baby's father in. My mother said the two of them were standing over the child, touching him, saying something in their own language. Nurses were swallowing tears as they were coming out of the room […]
Nolazain'ny reniko fa tamin'ny voalohany dia nosoniavi-ndry zareo mba hatolotra azy ireo taratasy rehetra [manambara ny fandaozany izato zaza]. Taorian'izay dia tonga teo am-baravaran'ny trano fitsaboana ireo zaza menavava vao teraka ilay reny terabao – nijoro teo ary nihiakiaka. Tsy dia mahay miteny tsara mantsy izy, ka dia sady mijoro izy no mikiakiaka. Niakatra an-tratrany ny rononon-janany. Nanomboka nampinono ity zanany. Tsy te hiala taminy intsony. Na dia raran'ny lalàna fatratra aza dia navela hiditra tao koa ny rain'ilay zaza menavava. Notantarain'ny reniko fa samy nijoro nanodidina izato zazakely izy roa [ray aman-dreny vaovao], nisafosafo azy, nibitsibitsika zavatra amin'izay fiteniny manokana. Samy nitelin-dranomaso avokoa ireo mpampivelona [nurse, infirmière] nony nivoaka avy tao izy roa […]
Nony nivoaky ny Hôpitaly niaraka tamin'ny zazakely izy ireo, dia nanolotra mofomamy hoan'ireo dokotera rehetra manodidina tao. Mofomamy faran'izay goavana tokoa. Ravahin'izao soratra izao : “Andriamanitra hitahy anareo.” Hoy ny reniko tamiko : “Amin'ny fomba ahoana no ahafahako manapaka amin'ny toe-javatra toy izao ?”